Indlu Esemaphandleni Epholileyo Ngaselwandle - I-Airbnb
Indlu Esemaphandleni Epholileyo Ngaselwandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLinda
Indlu esemaphandleni enamagumbi okulala atofotofo aqeshisayo eKitter Point, mna. Le ndlu iselunxwemeni oluthuleyo olujonge iChauncey Creek, kodwa yimizuzu nje eyi- ukuya kuyo yonke i-seacoast. Uhambo olufutshane oluya kumalwandle amaninzi (iHampton, iNH; iYork, iOgunquit, iWells, Mna). Kodwa ke, bhetele, hamba uye kwi-Kitter 's ethuleyo kwi-Seapoint Beach, gwedla ezantsi kweenduli kwii-kayaks ezimbini ezinikezelweyo okanye uphumle nje kumgangatho opholileyo ngencwadi, isiselo kunye nomngxuma womlilo wegesi...
Ilungele abantu abathandanayo okanye intsapho yabantu abathathu.
Elona xesha lide linokuhlalwa lune.
4.97 · Izimvo eziyi-87
Le ndlu iselunxwemeni apho abantu bahamba, babaleka baze bahambe ngebhayisekile. Indlela engasezantsi kweenduli yindawo entle yokuqubha neyokuhamba ngephenyane. Kukho amalwandle amaninzi amahle kufutshane nase, iSeapoint kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kunye neFort Foster, eyidolophu efihlakeleyo enamalwandle anesanti namatye, ibala lokudlala labantwana, izinto zokugrilla, iitafile zepikiniki kunye neendawo ezininzi ezifihlakeleyo. Uxolo nokuba wedwa kuyahlonitshwa ngabo bonke, nto leyo eyenza ibe yindawo epholileyo nevuyisayo...
Le ndlu isemaphandleni yindawo ezimeleyo. Asihlali kwisayithi yethu, kodwa siseduze ngokwaneleyo ukukunceda ngayo nantoni na. Ixesha elininzi, awuyi kusibona ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho xa sele ungenile ngaphandle kokuba ukhetha...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kittery